10M / 100M Media Converter Abenzi & Abahlinzeki | I-China 10M / 100M Media Converter Factory
2 Ports Ethernet kuya Fibre Media Converter ZJ-100102-25
I-10 / 100M Fibre Media Converter iguqula i-100BASE-FX fiber ibe yi-100Base-TX media media noma okuphambene nalokho. Nikeza ngesixazululo esilula futhi esonga ukonga inethiwekhi esekwe ku-fiber optic yokwelula ukufinyelela kwesiginali. Ukudluliswa kweMedia Converter kufika ku-120KM. Idizayini ye-plug-and-play, okulula ukuyifaka. Ingasetshenziswa njenge-stand-alone, noma ifakwe ku-2U 14 slot media converter chassis enamandla aphakathi nendawo. Incazelo • 10 / 100M 2 Port Ethernet ku-Fibre Media Converter • Isigamu noma igcwele d ...
I-1000Mbps i-Fibre Media Converter eyodwa ye-ZJ-GS03A / B
I-10/100 / 1000M Fibre Media Converter iguqula i-1000BASE-FX fiber ibe yi-1000Base-TX media media noma okuphambene nalokho. Nikeza ngesixazululo esilula futhi esonga ukonga inethiwekhi esekwe ku-fiber optic yokwelula ukufinyelela kwesiginali. Ukudluliswa kweMedia Converter kufika ku-120KM. Idizayini ye-plug-and-play, okulula ukuyifaka. Ingasetshenziswa njenge-stand-alone, noma ifakwe ku-2U 14 slot media converter chassis enamandla aphakathi nendawo. Izici • 10/100 / 1000M Media Converter, Imodi eyodwa Fibre eyodwa • Isigamu o ...
1000Mbps Dual Fibre Abezindaba Converter ZJ-GS-03
I-10/100 / 1000M Fibre Media Converter iguqula i-1000BASE-FX fiber ibe yi-1000Base-TX media media noma okuphambene nalokho. Nikeza ngesixazululo esilula futhi esonga ukonga inethiwekhi esekwe ku-fiber optic yokwelula ukufinyelela kwesiginali. Ukudluliswa kweMedia Converter kufika ku-120KM. Idizayini ye-plug-and-play, okulula ukuyifaka. Ingasetshenziswa njenge-stand-alone, noma ifakwe ku-2U 14 slot media converter chassis enamandla aphakathi nendawo. Izici • 10/100 / 1000M Media Converter, Imodi eyodwa Dual Fibre • Isigamu noma ...